October 2, 2021 - Online Hartha
ဘဝဆကျတိုငျး ဒီလိုသမီးနဲ့ဒီလို သမကျနဲ့မတှရေ့ပါစနေဲ့ အဘှားရယျ
October 2, 2021 by Online Hartha
သမီးနဲ့သားမက် ပေါင်းပြီးလမ်းဘေးတွင် စွန့်သွားခံရတဲ့ (၈၅) နှစ်အရွယ်အမေအို သနားစရာသတင်းပါ သမီးအရင်းနဲ့ သားမက်ကိုယ်တိုင် ကားဝင်းမှာ လာစွန့်ပစ်သွားတဲ့ အသက်(၈၅)နှစ် အဖွားအား မြဆည်းဆာမှ ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်လိုက်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ပရဟိတ ကိုဇင်မိုးမှ အခုလို ” စွန့်ပစ်ခံ အဖွားနာမည်က – ဒေါ်ခင်ကြိုင်/အသက် – (၈၅)နှစ်/ဇာတိက ဝေါမြို့နယ် ဆတ်သွားကုန်းရွာကပါတဲ့ … သားသမီး (၅)ယောက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ စွန့်ပစ်တဲ့ သမီးက အကြီးဆုံးသမီးတဲ့ မော်လမြိုင်ကားဝင်းမှာလာချသွားတာက သားမက် ကိုယ်တိုင် သား(၃)ယောက်က သူ့ဟာနဲ့သူ နေကြပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်ထဲ က ရွာက အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီ ထွက်သွားကတည်းက သေသလား ရှင်သလား မသိပဲ ဘာအဆက်အသွယ်မှ မရတော့ဘူးတဲ့ သမီးငယ်ကတော့ ထိုင်းဘက်မှာ … Read more
စတေနာကောငျးပီး ဉာဏျကောငျးလှနျးတယျ ရှပေဲပွုတျသယျလေး လေးစားပါတယျ
စေတနာကောင်းပီး ဉာဏ်ကောင်းလွန်းတယ်ရွှေပဲပြုတ်သယ်လေးရယ် လေးစားပါတယ် မက်စ် ရောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တော့ နံ့သာဆီနဲ့အီးဘဲ– ဒီမနက် ပဲပြုတ်သယ်ဆီ ပဲပြုတ်ဝယ်တယ်စားတော်ပဲက တအိတ် ၃၆၀၀၀ ကနေ အခု ၈၀၀၀၀ ဖြစ်သွားပီ အကိုလေးတဲ့ ဒါပေမယ့် ပဲပြုတ်ဈေးက မတက်ဘူးအရင်ဈေး အတိုင်းဘဲ ရောင်းမယ် ပဲပြုတ်သယ် ညမ ကပြောသေးတယ် ဒီလိုတွေ ဖြစ်မှာသိလို့ အရင်လက ဆွဲကြိုး ရောင်းပီး ပဲအိတ်ဝယ်ထားတာ ၈ သိန်းဖိုး ဝယ်လို့ရတယ် အဲ့ဒီ ပဲအိတ် ကုန်တဲ့ အထိ ဒီဈေးအတိုင်းဘဲ ကိုယ့်မြို့သားတွေ ကို ရောင်းမယ်အဲဒါကုန်သွားရင်တော့ ကျန်တာ အခြေအနေအရ ဘဲတဲ့…။ ဒါက ပဲပြုတ်သယ် စိတ်ထားဗျာ—-။ Credit Unicode Version စတေနာကောငျးပီး ဉာဏျကောငျးလှနျးတယျရှပေဲပွုတျသယျလေးရယျ လေးစားပါတယျ မကျဈ ရောငျးတဲ့သူတှနေဲ့တော့ … Read more
အသက် ၉၀ အမေ ” ဟင် …..အမေ …ဘာလုပ်မလို့လဲ …ည သန်းကောင်၁နာရီကျော်ကျော် လောက်တရေးနိး အပြင်ထွက်လာတဲ့ မလဲ့ ..အမေ့ကို ထမင်းဝိုင်းမှာ ကုန်းကွကွ မြင်လိုက်ရတယ်။ ” အမေ ဗိုက်ဆာလို့ ထမင်းစားမလို့ ….” ထမင်းအုပ်ဆောင်းဖွင့်လျက်သား တန်းလန်းနဲ့အမေကဖြေပါတယ်။ အော်…ဟုတ်လား…လဲ့ဝင်းပြင်ပေးမယ်အမေ။ညနေထဲက ဖယ်ထားတဲ့ ငါးဘတ်မွှေဟင်းငါးပိရည်ချိုပန်းကန် ခဝဲသီးဂျော်ဂျက်ရောင်ဟင်းရည်ပုဂံကို အမေ့အရှေ့တိုးပေးလိုက်တယ်။ညနေက ဝယ်ထားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး နဲ့ဟင်းရည်ကို နောက်နားမှာခပ်ရှိုရှို ပို့ထားလိုက်တာ .. “ငါ မုန့်ဟင်းခါးပဲစားမယ် ငါ့ကိုမုန့်ဟင်းခါးပဲပေး …”မုန့်ဟင်းခါးက ဘယ်အချိန်ထဲကချက်ထားတာလဲမသိဘူး အမေရဲ့အမေဝမ်းနူး နေအုန်းမယ် ရာသီကလဲပူတယ်ဆိုတော့ .. မလဲ့စကားမဆုံးသေးခင်မှာပဲ အမေ မုန့်ဟင်းခါး ဖတ်ထဲဟင်းရည် ထည့်ပီး စားနေပါပီ။” မကြီး အမေက ည ည ဗိုက်ဆာတယ်ဆိုပီး တရေးနိုးထထ … Read more
အမတေိုငျးဟာ ဒီလိုဆိုတာမမပေ့ါနဲ့ အမရေဲ့တနျဖိုးကို နားလညျနိုငျကွပါစေ
”သားသမီး (၆) ယောက်ကို (၁၁) နှစ် တိုင်တိုင်” စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ် ပြင်ရင်း ရှာကျွေးနေတဲ့ ”အာဂ အမေ”……. အမျိုးသား ဆုံးပါသွား သော်လည်း ၁၁ နှစ် တိုင်တိုင် သားသမီး ၆ ယောက် နဲ့ ဆိုင်ကယ် စက်ဘီး ပြင်ရင်း ကြိုးစား ခဲ့တယ် ’’ လို့ ဆိုလာသူ ဒေါ်စန်းကြည် စာဖတ်ပရိသတ်များ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ … ယခု တခါ တင်ဆက် ပေးမှာ ကတော့ ဖခင် မရှိတော့တဲ့ သားသမီး ၆ ယောက် အတွက် ၁၁ နှစ် တိုင်အောင် စက်ဘီး ဆိုင်ကယ် ပြင်ပြီး ရှာကျွေး ခဲ့သူ မိခင် … Read more
ပရဟိတလုပ်ရင် နာမည်ကြီးဖို့ လူသိများဖို့လိုလား
ပရဟိတလုပ်ရင်နာမည်ကြီးဖို့ လူသိများဖို့လိုလား ??? နာမည်ကြီးဖို့၊ လူသိများဖို့ အဓိက မလိုဘူးဆိုပေမယ်နာမည်ကြီး လူသိများတဲ့သူတွေ လုပ်ကြရင်ပိုလို့ ထိရောက်မယ်။ ပိုလို့ လှူနိုင်မယ်။ လိုအပ်ချက်တွေလည်း ပိုလို့နည်းစေမယ်။ပရဟိတလုပ်ရင်းနဲ့ပဲနာမည်အထိုက်အလျောက်ရလာရင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပိုလို့ ထိရောက်မယ်။ပိုလို့ အောင်မြင်မယ်။ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေပိုမို မြင့်မားလာပါ့မယ်။နာမည်ကြီးဖို့၊ နာမည်ရဖို့ သပ်သပ်တော့ကျနော်တို့တွေ ပရဟိတ ဘယ်တော့မှ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ နာမည်မကြီးရင်၊ လူသိမများရင်ကောပရဟိတ လုပ်လို့ မရဘူးလား ???ပရဟိတဆိုတာနာမည်မကြီး လူသိမများလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နေမှ ပရဟိတမဟုတ်သလိုသိန်းနဲ့သောင်းနဲ့လှူမှလည်းပရဟိတမဟုတ်ပါဘူး။ေးဝေးလံလံတွေကို သွားကူညီလိုက်မှပရဟိတ မမည်ပါဘူးနေ့စဉ် ကိုယ်နိုင်တာလေးတွေကစပြီးကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်က မိသားစုမိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေကိုစေတနာသန့်သန့်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးကာစိတ်ချမ်းသာအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးရင်ပဲ ပရဟိတမည်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေနဲ့ပရဟိတလုပ်ဖို့ ဘာလိုအပ်လဲဆိုရင်စေတနာသန့်သန့်နဲ့ တစ်ကယ့်ကိုလုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ Credit Unicode Version ပရဟိတလုပျရငျနာမညျကွီးဖို့ လူသိမြားဖို့လိုလား ??? နာမညျကွီးဖို့၊ လူသိမြားဖို့ အဓိက … Read more
ကွမ်းရောင်းပြီး တိုက်နဲ့ကားစီးလိုသူများအတွက် စီးပွားဖြစ် ကွမ်းဖော်စပ်နည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကွမ်းဆိုင်တွေဟာ အရောင်းရဆုံးစာရင်းဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဆိုင်က ကွမ်းကောင်းရင် တိုက်နဲ့ ကားပါ ဝယ်စီးနိုင်ကြတဲ့အထိပါပဲ။ ဘယ်လိုကောင်းအောင်ရောင်းမလဲဆိုတာကို ဆရာစားမချန်ပေးပါမည်။ ကွမ်း ကွမ်းဝယ်ရာတွင် စီးပွားရေးအမြင်အရ ကွမ်းရွက်သေးသေးကိုသာ ဝယ်ရမည်။အရွက်သေးပါက ပိဿာလိုက် ဝယ်ယူရာတွင် ရွက်ရေများများပိုရသဖြင့် ကွမ်းယာ အထွက်ပိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကွမ်းရွက်ကို အရင်း(အရိုး)ဘက်နှင့်အဖျားဘက်ကို ညှပ်ထားရသည်။ ကွမ်းရွက်ကိုရေဆေးပြီး ဒိန်ချဉ်နှင့်စိမ်ကာ ကွမ်းဘန်းထဲတွင် ညီညီညာညာ မျှတ လှပအောင် စိမ်ထားနှပ်ထားပါက မိမိဆိုင်မှ ကွမ်းယာကိုစားလိုက်သည်နှင့် နုနုညံ့ညံ့ အရသာကို ရရှိစေပြီး စားသုံးသူများ အကြိုက်တွေ့စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထုံး ထုံးစပ်နည်းအလွယ်နည်း။။ ကွမ်းယာ ပစ္စည်းဆိုင်မှ အသင့်ဖောက်ထားသော ထုံးဗူး (ရေသန့်ဗူးနှင့်) ထည့်ထားသော ထုံးဗူး သိုမဟုတ် အထုတ်ကိုဝယ်ပါ။ အုန်းနို့(စတိုးဆိုင်မှာ … Read more
လူတစ်ချို့ရဲ့စိတ်က ဘယ်လိုတောင် မိုက်ရိုင်းနိုင်ကြတာလဲကွယ်
လူတစ်ချို့ရဲ့စိတ်က ဘယ်လိုတောင်မိုက်ရိုင်းနိုင်ကြတာလဲကွယ်။ ဒီအဖိုးနဲ့အဖွားက အသက်အရွယ်ကြီးပြီး သားထောက်သမီးခံလဲမရှိပေမဲ့ အဖိုးနဲ့အဖွားက အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တယ်။ အဖိုးကကျန်းမာတယ် အဖွားက မျက်စိမမြင်ဘူး မွေးရာပါမမြင်တာလို့ပြောတယ်။ အဖိုးနဲ့အဖွား ချောင်းဘောင်လေးတစ်ခုမှာတောင်းရမ်းစားသောက်ကြတာပါ ။ လူတစ်ယောက်ကလာပြီး ထီလက်မှတ်တွေပေးသွားပြီး အဖိုးအဖွားကို ထီ၇၀၀၀၀ ပေါက်ထားတဲ့ထီလက်မှတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလိမ်ပြီးပေးသွားတယ် ။ ထီလက်မှတ်က ဘယ်ဘဝက လက်မှတ်မှန်းတောင်မသိ ။ အဖိုးမှာနေပူပူမှာ ထီလက်မှတ်နဲ့ ပိုက်ဆံထုတ်မယ်ဆိုပြီးသွားနေတာ ။ ကျမရောက်သွားတဲ့ထိ ထီးလက်မှတ်ကို သူ့အိတ်ထဲထည့်ပြီး ငွေ ၇၀၀၀၀ ပေါက်ထားတယ်အထင်နဲ့ အဖိုးခမျာ ပျော်နေတာ ။ ကျမရောက်မှ ဆန်ဆီ နဲ့ ငွေသုံးစရာသွားပေးမှ အဖိုးကိုရှင်းပြမှ အဖိုးမှာ ငိုရှာတယ်။နှောက်ချင်ရင် လူငယ်ချင်းချင်းနှောက်ကြပါ။ ခုလိုအသက်ကြီးအဖိုးအဖွားတွေကိုမနှောက်ကြပါနဲ့ ကျမရောက်တဲ့နေ့နဲ့တွေ့လို့တော့ သေပြီလို့မှတ်ထားတအားစိတ်တိုတယ်…။ Credit Unicode Version လူတဈခြို့ရဲ့စိတျက ဘယျလိုတောငျမိုကျရိုငျးနိုငျကွတာလဲကှယျ။ ဒီအဖိုးနဲ့အဖှားက … Read more
မျက်နှာကိုကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိမရှိ သိနိုင်မယ့်နည်း(၉)နည်း
လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်ရုံနဲ့ သူ့အကြောင်းကို အတိအကျပြောနိုင်တဲ့ ရုပ်လက္ခဏာကို ဖတ်တဲ့ ပညာမျိုးဆိုတာ အံ့သြ ဖို့ကောင်းတဲ့ ပညာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရည်သွင်ပြင်က ကံကြမ္မာ ကို မသတ်မှတ် နိုင် ပေမယ့် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင် သလဲဆိုတာ ကိုတော့ အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်း နိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်ရိုးရာ ရုပ်လက္ခဏာ ဖတ်ပညာအရ လူချမ်းသာ တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင် ချေများတဲ့ သူတစ် ယောက် ရဲ့ ရုပ်လက္ခဏာ တွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ် နော် ။ (၁) နှစ်ဖက်ညီညာတဲ့ မျက်နှာအချိုးအစား မျက်နှာအချိုးအစား နှစ်ဖက် ညီညာနေတာ မျိုးက ရှားပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့ဒီလို မျက်နှာမျိုးရှိခဲ့ရင် သူမတူအောင်ချမ်း သာကြွယ်ဝ … Read more
တစ်ကိုယ်လုံး တန်ဖိုးတွေတွက်ပြတာ ခေတ်စားလာတော့ ကြုံဖူးတာလေးပြောပြချင်တယ်
တစ်ကိုယ်လုံးတန်ဖိုးတွေ တွက်ပြတာ ခေတ်စားလာတော့ ကြုံဖူးတာလေးပြောပြချင်တယ်…. ဟိုးတစ်​​လောက အန်​ကယ်​တစ်​​ယောက်​ သူ့နာရီချွတ်​ပြီး” ဒီနာရီဘယ်​​လောက်​တန်​မယ်​ထင်​လဲ မှန်းကြည့်​” ဆိုပြီး ကျွန်​​တော့်​ကို​​မေးတယ်​….။ (သူကချမ်းသာ ​အောင်​မြင်​​နေတဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်​ရှင်​တစ်​ဦးပါ) မမှန်းတတ်​ဘူးခင်​ဗျ လို့​ပြောလိုက်​​တော့ သူက ပြန်​​ပြောတယ်​….။ အမေရိကန်​ဒေါ်လာ ၆သိန်း တန်​တယ်​တဲ့………မြန်​မာ​ငွေနဲ့ဆို သိန်း ၇၈၀၀ ​ကျော်​တန်​တာ​ပေါ့…..။(အမ​လေးဗျ… အံ့သြလို့မပြီး​သေး..) “ဟိုပွဲ ဒီပွဲ အခမ်းအနား​တွေမှာ တစ်​ခါလာလည်း ဒီနာရီ တစ်​ခါလာလည်း ဒီနာရီ ဖြစ်​​နေမှာစိုးလို့…. ​ဒေါ်လာ ၆သိန်း ၇သိန်း တန်​ နာရီချည်း ၅ လုံး​လောက်​ ၀ယ်​ထားတယ်​” ဆို​တော့…..ဟို​က်……ရှားဘား……ကျွန်​​တော်​ ပက်​လက်​လန်​သွားတယ်​…..။ (ကိုယ်​​တွေ တစ်​မျိုးလုံး တစ်​​ဆွေလုံးပိုင်​ဆိုင်​မှုကို​ပေါင်းရင်​​တောင်​ သူ့နာရီဖိုး​မရှိဘူး….) ဒါ​ပေမဲ့…..အခု​တော့ အဲ့ဒီနာရီထဲက တစ်​လုံးပြီး တစ်​လုံးပြန်​​ရောင်း​နေပြီတဲ့….” စီးပွား​ရေးအတွက်​​ငွေလိုလို့လား…..အန်​ကယ်​..” လို့​မေးလိုက်​​တော့…. ” မဟုတ်​ဘူး…..ဆင်းရဲတဲ့ … Read more